May 7, 2021 - Babal Khabar
May72021 by EditorNo Comments
अनुसन्धानले पत्ता लागायो कोरोनाको संक्रमण जबरजस्त यस्तो ग्रन्थीमा रहने
काठमाडौं । विश्वलाई कोरोना महामारीले दुःख दिन थालेको एक वर्ष बितेको छ । यो बीचमा कोरोना भाइरस नयाँ–नयाँ रुपमा साथ आइरहेको छ । भाइरसको स्वरुप परिवर्तन भएसँगै त्यसका लक्षण र उपचार पनि फरक–फरक हुँदैछन् । अहिले नयाँ खालको कोरोना लक्षणहरुबारे चर्चा शुरु भएको हो । हालै बाहिर आएको एक अनुसन्धान अनुसार कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूका लागि एक सान्त्वनादायी समाचार आएको छ । जसले स्वाद र गन्ध महसुस गर्न सक्दैनन्, यस्ता बिरामीहरूका लागि भाइरस त्यतीँ गम्भीर नहुने खुलेको हो । यो अध्ययन जीएसवीएम मेडिकल कलेजमा २२० बिरामीहरुमा गरिएको थियो । अन्वेषक डा. हरेन्द्र कुमार भन्छन् कि अनुसन्धानका लागि दुई कोटीहरू सिर्जना गरिएको थियो । त्यस, कोटीमा बिरामीहरू लगिएका छन् जसले स्वाद र गन्ध पाउँदैनन् । अर्को कोटी ती बिरामीहरू थिए जसले स्वाद र गन्ध थाहा पाइरहेका थिए । जब ती दुबैमा तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो, तब यो पत्ता
मास्क धोएर लाउन मिल्छ? कि मिल्दैन? डाक्टरको सुझाव यस्तो छ,हेर्नुहोस्।
कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहन मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म सबैले बुझिसके। तर, मास्क कसरी लगाउने र कस्तो लगाउने भन्नेमा धेरैलाई अन्यौल नै देखिन्छ। सबभन्दा ठूलो अन्यौल त एन–९५ मास्कले ल्यायो। कोरोनाको पहिलो लहर सुरू हुँदा भल्भ भएको एन–९५ मास्क सुरक्षित हुन्छ भनेर धेरैले त्यस्तै लगाए। पछि त्यो मास्क कोरोना संक्रमण रोक्न भरपर्दो मानिएन। त्यसले मास्क लगाउने व्यक्ति सुरक्षित रहे पनि ऊ संक्रमित छ भने अरूलाई सुरक्षा नगर्ने कुरा सार्वजनिक भयो। कतिपय व्यक्तिले भित्र सर्जिकल मास्क लगाएर बाहिर एन–९५ लगाएको पनि देखियो। हामीकहाँ सर्जिकल मास्क वा एन–९५ मास्क दुई–तीन दिन लगातार लगाउने र धोएर फेरि प्रयोग गर्ने चलन पनि छ। के यस्तो गर्नु राम्रो हो? यति मात्र होइन, कपडाको मास्क लगाउनु ठीक हो कि होइन र आफूलाई संक्रमण नभए पनि मास्क लगाएर हिँड्न किन जरुरी छ भन्ने अन्यौल हामीकहाँ अहिले पनि उत्तिकै छ। यि
काठमाडौं- विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमालेको संकट समाधान उन्मुख देखिएको छ । चर्को विवादबाट नेताहरू संवादतर्फ लागेका छन् । एमालेको विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरु पनि ब्यापक दौडधुपमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबिचमा बिहिबार राष्ट्रपति निवासमा अनौपचारिक छलफल भएको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रोहबरमा भद्र सहमति भएको बताइएको छ । उक्त सहमति अनुसार आजबाट विवाद समाधनका लागी अध्यक्ष ओलीले फागुन ७ गतेको निर्णय सच्चाउने र कार्यदल बनाएर अन्य समस्याको समाधान गरिने बताइएको छ । त्यसका लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल अहिले केही वेरमा एमालेको नयाँ पार्टी मुख्यालय थापाथलीमा भेटवार्ता गर्दैछन । दुवै तर्फका दोस्रो तहका नेताहरुको सहभागितामा सहमति बनाउने तयारी भैरहेको बताइएको छ । भद्र सहमति राष्ट्रपति निवासमै बएको भएपनि आजको छलफलले तल्लो तहसम्मको विवाद समाधानका लागि कार
बादलको अडान : नजित्ने चुनाव नलड्ने ! भनेपछी….
२३ वैशाख, काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश अन्य समूहतर्फ रिक्त भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार (वैशाख २४ गते) उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । तर, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार बिहीबार साँझसम्म टुङ्ग्याएको छैन । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्वाचित भएको क्षेत्र हो यो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बादल एमाले प्रवेश गरेपछि रिक्त भएकोले उपचुनाव हुन लागेको हो । खाली भएको ठाउँमा एमालेले पुनः बादललाई निर्वाचन लडाउन चाहेको छ । तर, स्वयं बादल भने उपचुनाव लड्न तयार नभएको नेताहरुले बताएका छन् । उपनिर्वाचनमा वाग्मती प्रदेशमा तपाईंहरुको उम्मेदवार को हो ? भन्ने प्रश्नमा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुमनराज प्याकुरेल भन्छन्, ‘जो जो साथीहरु पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा आउनुभएको थियो, एमालेमा आएबापत, प्रधानमन्त्र
अबको चुनावमा कांग्रेसको बहुमत आउने पक्का छ, के गर्ला कांग्रेसको सरकारले : ओली
काठमाडौं। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूलाई भेटेका छन्। निकटका नेताहरूसहित देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे। एमाले र कांग्रेस नमिलेसम्म प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन नसक्ने जनाउँदै ओलीले सहकार्यका लागि प्रस्ताव पनि गरे। कांग्रेस नेताहरूले भने ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सभापति देउवासहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न ओलीलाई सुझाव दिए। वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्न कांग्रेस नेताहरूले गरेको आग्रहलाई खासै महत्व दिएनन्। बरु उनले लोकत
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‌बाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके यस्तो गर्ने संकेत
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌बाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संकेत गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग बुधबार भएको छलफलमा ओलीले निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्तावसमेत गरे । कांग्रेसले विश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट बुधबार ओली सहयोगीहरूका साथ देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उनले लामो पृष्ठभूमिका साथ आफूले संसद्‌बाट विश्वासको मत नपाए निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बन्ने उल्लेख गरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि देउवासँग आगामी असोज वा मंसिरभित्र निर्वाचन हुने गरी अघि बढ्ने बताउँदै त्यसका लागि सहयोगको आग्रह गरेका थिए । निर्वाचन गराउने ओलीको भनाइमा विश्वस्त बन्दै देउवाले पनि सरकार बनाउनेतिर चासो दिएका थिएनन् । उनको प्राथमिकता यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्नेभन्द
धनगढी उपमहानगरपालिका- ५ का यज्ञराज जोशीको परिवारका सबैलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। उनीहरूले वैशाख १६ गते श्वाब दिएर परीक्षण गर्दा १९ गते सबै जनालाई कोरोना संक्रमण भएको रिपोर्ट आएको थियो। अस्पताल गए झन् बढी बिरामी पो पर्ने हो की भन्ने चिन्ताले घरमै ख्याल गरेर बसेका छौं,’ जोशीले सेतोपाटीसँग भने। उनका ७२ वर्षका बुबा, ६० वर्षकी आमा, श्रीमती र दुई छोराछोरी तागतिला खानाकुरा खाएर मनोबल उच्च बनाएर कोरोनालाई छिट्टै जित्ने आशामा होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। परिवारका सबैलाई कोरोना देखिएपछि सुरूमा उनीहरू आत्तिएका थिए। उनको घरमा वैशाखको पहिलो साता सप्ताह लगाइएको थियो। सप्ताहको भीडबाट कोरोना परिवारमा आएको हो कि भन्ने जोशीलाई लागेको छ। ‘सुरूमा बाबुलाई खोकी लाग्यो, केही दिनपछि ज्वरो पनि आयो, एकएक गर्दै हामी अरूलाई पनि ज्वरो आएपछि सिटामोल खायौं, शंका लागेर जाँच्दा कोरोना पोजेटिभ आयो,’ उनले भने। अ
खुशीको खबर घर घरमै पुगेर स्वाब संकलन सुरु, शुल्क पाँच सय रुपैयाँ लाग्ने
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जोखिमयुक्त स्थानमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सघन रूपमा गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतमले बुधबार प्रेस ब्रिफिङमार्फत् स्थानीय तहका जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न अनुरोध गरेको हो। मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले गरेको निर्णयअनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी नमूना संकलन गरेर कोभिड-१९को परीक्षण बढाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको हो। त्यस्तै, मन्त्रालयले घरमै गएर पिसिआर परीक्षण गर्ने नमूना संकलनको शुल्क अधिकतम् ५०० सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। घरमा पुगेर पिसिआर परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्ने शुल्क अधिकतम ५०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको प्रवक्ता गौतमले बताए। यसका लागि आवश्यक मापदण्डको व्यवस्थापन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्ने निर्णय भएको गौतमले बताए।